Humour | MyanmarReferral
Refer each other to meet your needs.
Form For Business Directory
How to list your business ?
humour, funny ,laught
Canadian Citizenship Interview with the best Interpreter !!
November 4, 2011Posted by lathaphotoke	Canadian Citizenship Application
An immigrant from China is applying for citizenship in Canada . He is to be interviewed byaCanadian immigration officer. He does not speak English well and knows nothing about Canada . Therefore, he invitedaspecial translator to help him in his interview.
Officer: Do you know who was the first Prime ...	Posted in Humour
| Tagged Humour | 1 Comment
Lost your password?	Subscribe inareader
အဖြူရောင်သံစဉ်နားဆင်ရန်	BBC Broadcast (တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်)Sunday Morning:Saturday MorningFriday MorningThursday Morning: RFA Broadcast (တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်)အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-19 17:29အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-19 14:29အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-19 13:29DVB TV broadcast	DVB TV - 16 May 2013 - 6pm News	National League for Democracy TV	PC-PolishFM-1	Archives	Select Month March 2012 (1)
Myanmar Time	<!-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info --> Rangoon Time<!-end of code-->
MYANMAR CALENDAR	ခေါက်ဆွဲ အကြွပ်ကြော်
ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူမှာ နှစ်မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီး ရေစစ်ထားပါ။ ရေစစ်သွားပြီ ဆိုရင် ခေါက်ဆွဲကို ဆီပူပူမှာကြွပ်နေအောင် ပြန်ကြော်ပြီး ပန်းကန်ပြားထဲ ထည့်ထားပါ။ ပုစွန်၊ ပြည်ကြီးငါးကို သန့်စင်ပြီး ကြွက်နားရွက်၊ ဥနီနဲ့ ချင်းကို အမျှင်လေး ရအောင် လှီးချွတ်ထားပါ။
အားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒယ်အိုးထဲကို အသားငါးနဲ့ အသီးအရွက်တွေကို ထည့်ပါ။ အရသာအတွက် ခရုဆီ၊ ဆီမွှေး၊ ငံပြာရည်၊ဆား၊ သကြား၊ ကြက်သားမှုန့်တို့ကို ထပ်ထည့်ပြီး ကျက်အောင် ချက်ပါ။ ကော်မှုန့် ထပ်ထည့်ပြီး အရည်ပျစ်ပျစ် ရလာရင် ပုဂံလုံးထဲ ထည့်ထားပါ။ အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်ပြီဆိုရင် ခေါက်ဆွဲ အကြွပ်ကြော်ထဲကို ပုစွန်စွပ်ပြုတ်ရည် ဆမ်းပြီး စိတ်ကြိုက်စားလို့ရပါပြီ။
Read More ယနေ့ ကြွလာမိတ်သဟာများ	www.sportwettenmeister.com
Top ArticlesMyanmarCelebrity	DOZO 22nd Anniversary Fashion Show @ Strand Hotel	MTV	Nyein Chan Yayy - Connie	VOA Burmese TV	Burmese TV Update 0518-2013	>
My- Goal ဘောလုံးပွဲသတင်း
ကမ္ဘောဇ Football Club